डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! रहेन जिन्दगी! – Sandesh Press
डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! रहेन जिन्दगी!
May 27, 2021 450
काठमाडौं : डाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति बेहाेर्नु परेकाे घटना बाहिर आएकाे छ । बुटवल गोलपार्कका ५८ वर्षीय पुरुषलाई सामान्य ज्वरो आयो । घरमै रहेको सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्काे दिन आयो । फेरि औषधि खाए । अर्काे दिन शरीर दुख्यो । अनि सामान्य खोकी पनि लाग्यो । शरीर कमजोर हुँदै गए पनि उनी को-रोना परीक्षण गर्न गएनन् ।
छैटौं दिन उनी उठ्नै सकेनन् । अक्सिजनको तह ८० भन्दा तल पुगिसकेको थियो। परिवारका सदस्यले घरमै अक्सिजन पु-राइदिए तर, उनमा केही सुधार भएन । केही समयमै उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगियाे । अस्पतालमा भीडभाडले उनले बेड पाएनन् । बेड खोज्दा खोज्दै आधा दिन बित्यो। एम्बुलेन्समा राखिएका उनलाई भैरहवातर्फ लगियो तर, अस्पतालसम्म पुग्न पाएनन् । एम्बुलेन्समै उनको नि- धन भयो ।
प्रादेशिक अस्पताल आएपछि को-भिड परीक्षण गर्दा को- रोना पोजेटिभ देखिएको थियो। ‘बुवाले अस्पताल जान समयमै नमान्दा ब-चाउन सकिएन,’ उनका छोराले भने । बुटवल–११ का दीपक ज्ञवाली १० वैशाखमा ज्वरो आएर मेडिकल पुगे। मेडिकलका चिकित्सकले उनलाई टाइफाइड ज्वरो भन्दै औषधि दिए । दुई दिन खाए, ज्वरो निको भएन । उनका दाजु फेरि मेडिकल पुगे र भाइलाई सुधार नभएको बताए। मेडिकलका चिकित्सकले सात दिनको औषधि खाए ठीक हुन्छ भनेर फर्काए ।
बिहेको तरखरमा रहेका उनी ज्वरो आउँदासमेत केटी हेर्न गुल्मी पुगे । वैशाख १५ गते औषधि खाएरै बिहे मण्डपमा बसे। उनको स्वास्थ्य कमजोर भयो। बिहे मण्डपबाटै उनलाई अस्पताल लगियो तर, अस्पतालबाट फ-र्किएनन्। आईसीयूमा पुगेका उनको २९ गते मृ- त्यु भयो। को- रोना महा-मारीका बेला मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि मेडिकल तथा आफैं औषधि किनेर खाँदा भएका ठूला क्ष-तिका उदाहरण हुन् यी ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार अन्तिम अवस्थामा आउने धेरै बिरामीको उपचारका क्रममा मृ- त्यु भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालका को- रोना फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले यो समयमा को- रोनाका लक्षणहरूलाई कमजोर आँकलन गर्नै नहुने बताए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रहेकाे छ ।
Prev५० प्रतिशत घरभाडा मिनाहा, भाडा नदिएको भन्दै किचकिच गरे कारबाही
Nextत्रिसुलिमा महेन्द्रा बलेरो खस्यो ३ जना युवक झ्यालबाट निस्केर पौडेर बाँचे, गाडी बेपत्ता (६ तस्विर सहित)
भर्खरै निशा घिमिरेको यसरी गरे अन्तिम अन्त्येष्टि,आमा भईंन बेहोस…भिडियो हेर्नुहोस्
काठमाडौंका यी स्थानमा धेरै को’रोना सं’क्रमित, आजदेखि टोल–टोलमा परीक्षण गरिदै
२४ घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थपिए यतिधेरै कोरोना संक्रमित